Budata Garena Free Fire MAX APK maka Android
Budata Garena Free Fire MAX,
Garena Free Fire MAX bụ ụdị ọkụ na-emezi nke ọma na egwuregwu egwuregwu, otu nime ihe kacha ebudatara ma kpọọ egwuregwu royale na Play Store. E megheere ndị ọrụ ekwentị gam akporo mbụ mgbe ha nwetasịrị ohere (ndebanye aha) maka Free Fire MAX, nke bụ otu egwuregwu mana ụdị nke juru nọnụ.
Budata Garena Free Fire MAX APK
Garena Free Fire MAX na -enye nsonaazụ dị elu, ihe nkiri na eserese na -eme ka ahụmịhe onye ọrụ dị mma na -enweghị ịchụ egwuregwu.
Site na nkwado ikpo okwu, Free Fire na Free Fire MAX ndị egwuregwu nwere ike igwu egwu netiti onwe ha ọbụlagodi na ha nwere ụdị egwuregwu dị iche iche. Ndị egwuregwu nwere ike banye na akaụntụ Free Fire ha dị. Site na teknụzụ Firelink, a na -emekọrịta data netiti egwuregwu abụọ, gụnyere ọganihu, ihe egwuregwu. Ndị egwuregwu nwere ike ịgbanwee netiti egwuregwu abụọ ahụ noge ọ bụla wee jiri otu akaụntụ maka egwuregwu abụọ ahụ. Ndị na -egwu egwuregwu nwere ike ịkekọrịta ọganihu na ihe ndekọ akaụntụ ha na egwuregwu abụọ site na iji otu akaụntụ.
Kpọọ Garena Free Fire MAX
Emebere Free Fire Max ka ọ nye ahụmịhe royale kacha mma. Kporie ụdị egwuregwu dị iche iche na -atọ ụtọ na ndị egwuregwu Free Fire niile nwere teknụzụ Firelink naanị. Kpoo agha a na -enwetụbeghị mbụ na mkpebi Ultra HD yana mmetụta na -akpali akpali. Zuonụ, gbaa izu ohi, wee lanarị. Ị nwere naanị otu ihe mgbaru ọsọ; Ịbụ nwoke ikpeazụ guzoro ndụ.
Egwuregwu ọsọ ọsọ, nke na -emikpu onwe ya nke ukwuu - ndị egwuregwu 50 na -eji parachute banye nagwaetiti a gbahapụrụ agbahapụ, mana ọ bụ naanị otu. Ndị na -egwu egwuregwu na -alụ ọgụ maka ngwa ọgụ na gia ruo ihe karịrị nkeji iri, na -anwa ịkwatu ndị ọ bụla lanarịrịnụ na -eguzo nụzọ ha. Zoo, dị ọcha, lụọ ọgụ wee lanarị. Ahụmịhe agha royale kacha mma nwere eserese dị elu!
Otu egwuregwu, ahụmịhe ka mma - Site na eserese HD, mmetụta pụrụ iche emeziwanye na egwuregwu dị nro, Free Fire MAX na -enye ahụmịhe nlanarị dị omimi maka ndị niile na -akwado royale agha.
Ndị otu egwuregwu 4 nwere mkparịta ụka olu nime egwuregwu-Mepụta otu ndị egwuregwu ruru 4 ma soro ndị otu gị kwurịta okwu site na mbido. Duru ndị enyi gị gaa mmeri wee bụrụ ndị otu ikpeazụ iji merie nelu.
Teknụzụ Firelink - Ị nwere ike kpọọ Free Fire Max nke ọma site na ịbanye na akaụntụ Fire Fire na Firelink. A na -echedo ọganihu gị na ihe gị ozugbo nime ngwa abụọ a. Ị nwere ike iji ụdị egwuregwu ọ bụla na -eji Free Fire na Free Fire Max nagbanyeghị ụdị ngwa ha na -eji.
Budata Garena Free Fire Max PC
Kedu otu esi ebudata Garena Free Fire Max na kọmputa? Ebe ọ bụ na enweghị ụdị PC nke Garena Free Fire Max, ị ga -eji emulators Android budata egwuregwu na kọmputa gị. Dịka ọmụmaatụ, site na MEmu, otu nime ihe ngosi kacha mma gam akporo efu, ị nwere ike iwunye Garena Free Fire Max na kọmputa gị wee jiri nkwado keyboard na òké gwuo egwu.
Kedu mgbe Garena Free Fire MAX ga -ahapụ?
Kedu mgbe Garena Free Fire Max bụ ụbọchị mwepụta? A tọhapụrụ Free Fire Max mgbe oge nnweta mbụ (ndebanye aha). Noge na -adịghị anya, Garena hapụ egwuregwu ahụ nụwa niile. Akara ụbọchị mwepụta Free Fire Max bụ Septemba 28, 2021. Ebe enyere ihe ọ bụla na -efu na Free Fire, ndị egwuregwu ga -atụgharị na ụdị a na mwepụta egwuregwu. Site na ụdị ọhụụ nke Free Fire, Free Fire Max ga -erute ọkwa ọhụrụ na egwuregwu royale agha.
Garena Free MAX System chọrọ
Garena Free Fire MAX chọrọ sistemụ sistemụ Android dị ka ndị a; Ịchọrọ ekwentị gam akporo nwere 1.5 GB nke nchekwa efu yana 2 GB ma ọ bụ karịa nke RAM. Free Fire Max abụghị egwuregwu Pay-to-Win ebe ịzụrụ nime dị ka Free Fire na-enye ndị egwuregwu uru karịa ndị asọmpi ha. Ụdị egwuregwu a kwalitere dị mma maka mmadụ niile.
Ọ bụrụ na anyị na -echeta obere usoro chọrọ iji kpọọ Free Fire;
Sistemụ nrụọrụ: Android 4.4
Nhazi: Dual Core 1.2GHz
Nchekwa: 1GB Ram
Ọkụ bụ nhazi kacha nta iji nwee ike kpọọ Fire na ngwaọrụ gam akporo. Ihe kacha nta chọrọ ka egwuregwu gbaa ọsọ mana ọ nwere ike ọ gaghị eme egwuregwu ahụ ọfụma. Usoro sistemụ akwadoro maka ịrụ ọrụ nke ọma:
Sistemụ nrụọrụ: Android 7
Nhazi: Octa Core 1.8GHz
Nchekwa: 3GB Ram
Garena Free Fire MAX Ụdịdị
Mmepụta: GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED
Kacha ọhụrụ na: 02-10-2021
Agha 2wa nke Abụọ - Agha iswa bụ netiti egwuregwu egwuregwu edobere na oge Agha Worldwa nke Abụọ....
Contra Returns bụ ụdị mkpanaka nke Contra, otu nime oge ịse agba agba em up arcade games. The ọhụrụ...
Njem na elu igwe na bombu ndị iro gị na gị agha na i nwere ike iji kwadebe onwe gị. Họrọ ugbo elu...
Ghosts of War bụ Agha IIwa nke Abụọ isiokwu onye mbụ shooter. Egwuregwu egwuregwu na-atọ ụtọ na...
Garena Free Fire MAX bụ ụdị ọkụ na-emezi nke ọma na egwuregwu egwuregwu, otu nime ihe kacha...
Mad City Military II Demobee 2018, nke dị netiti egwuregwu ekwentị mkpanaaka wee bido nefu na...
Battlefield Mobile bụ otu nime egwuregwu FPS kachasị mma nke enwere ike ịkpọ na ekwentị gam akporo....
Just Cause Mobile bụ onye na-agbapụ ihe nbudata nefu nke Square Enix mepụtara. Tọrọ na ụwa nke...
Farlight 84 bụ otu nime ihe nkiri ndị egwuregwu egwuregwu royale a ma ama dịka Fortnite, PUBG, Apex...
Arrow Fest APK bụ mmepụta nke m ga-akwado ndị na-amasị egwuregwu mkpanaka dị mfe mana na-atọ ụtọ...
Tomb Raider Reloaded bụ otu nime mmepụta nke m ga -akwado ndị na -achọ Tomb Raider Mobile. Lara...
Site na ịsị budata PUBG Lite, ị nwere ike banye ozugbo na ụdị PUBG akwadoro maka ekwentị niile....
Raziel: Dungeon Arena bụ egwuregwu mbanye anataghị ikike na slap action rpg na ekwentị gam akporo....
Mkpụrụ Ninja 2 bụ egwuregwu mbanye anataghị ikike mkpụrụ osisi ị nwere ike budata na APK ma ọ bụ...
Egwuregwu Archer Hero 3D bụ egwuregwu egwuregwu na -atọ ụtọ nke ị nwere ike iji na sistemụ arụmọrụ...
Shadow Knight so na egwuregwu rpg efu nke enwere ike igwu na ekwentị gam akporo. Tọọ na Harmonia,...
Mpaghara MARVEL nke ndị mmeri bụ egwuregwu rpg nịntanetị ị nwere ike ibudata ma kpọọ na ekwentị gam...
Enwere ike ịkpọ GTA 5 APK ụdị egwuregwu gam akporo nke na-aga nihu na-eme site na ndị na-akwado...